သင်၏စမတ်နာရီအတွက်နာရီအသစ်များလိုအပ်ပါသလား။ - Facer Daily Mix သည်သင့်ကိုကူညီနိုင်သည် Androidsis
သင်၏စမတ်နာရီအတွက်နာရီအသစ်များလိုအပ်ပါသလား။ - Facer Daily Mix သည်သင့်ကိုကူညီနိုင်သည်
ရှာဖွေနေ Chinese Smartwatch အတွက်အက်ပလီကေးရှင်းများ? သင့်တွင်စမတ်နာရီရှိပါကသင့်စိတ်ကြိုက်အနေအထားပေါ် မူတည်၍ သင်ပြောင်းလဲနိုင်သောနာရီမျက်နှာများသို့မဟုတ်နံပါတ်များကိုကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောအရေအတွက်ရှိနိုင်သည်။ သို့သော် အကယ်၍ သင်သည်သင်၏လက်ရှိနာရီ၏မျက်နှာများကိုငြီးငွေ့ပြီးနေ့စဉ်အသစ်တစ်ခုကိုလိုချင်သည်ဆိုလျှင်၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်အားအထောက်အကူပြုမည့် application တစ်ခုရှိပါသည်။
Facer Daily Mix ဟုခေါ်သောအဆိုပါ application သည်စမတ်နာရီ၏မျက်နှာပြင်နှင့်ပတ်သက်သောငြီးငွေ့စရာမဖြစ်စေရန်၎င်း၏“ Daily Mix” လုပ်ဆောင်ချက်မှတစ်ဆင့်လက်ပတ်နာရီအသစ်များကိုနေ့စဉ်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောနည်းလမ်းများဖြင့်ကာကွယ်ရန်တီထွင်ခဲ့သည်။
1 Facer ၏အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်များ
2 Facer Watch မျက်နှာများကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ
တီထွင်သူများ၏အဆိုအရ Facer Daily Mix သည်သုံးစွဲသူများကိုခွင့်ပြုသကဲ့သို့ "နာရီမျက်နှာများအတွက် slot machine ကဲ့သို့" ဖြစ်သည် နေ့တိုင်းရရှိနိုင်သောကျပန်းနယ်ပယ် (၁၀) ခုအနက်မှတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါ.
သို့သော်အကောင်းဆုံးမှာ Facer တွင်လက်ပတ်နာရီ ၂၀၀၀၀ နီးပါးရှိသည် ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ဒီဇိုင်းအသစ်များနှင့်နယ်ပယ်သစ်များကိုသင်အမြဲတမ်းသင့်အတွက်ရရှိနိုင်လိမ့်မည်။ ထို့အပြင်၎င်း၏ဖန်တီးမှုကိရိယာတစ်ခုမှတဆင့်သင်လုပ်နိုင်သည် သင့်ကိုယ်ပိုင်နာရီမျက်နှာများဖန်တီးပါ ကြီးမားသောဒေတာဘေ့စ်တစ်ခုရှိသော်လည်း၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပိုင်နာရီမျက်နှာဖုံးလုပ်ရန်မလိုအပ်ပေ။
ဤတွင် Facer ၏အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားသည်။
ဘက်ထရီအဆင့်၊ အဆင့်မြင့်ကောင်တာ၊ WiFi ညွှန်ပြချက်ပါသည့်နောက်ခံအခြေအနေ
Android Wear နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်
အောက်ဖော်ပြပါဗီဒီယိုတွင်သင်ကြည့်ရှုနိုင်သည့်အတိုင်း Face Face များကိုရှာဖွေရန်နှင့် Facer's Daily Mix feature မှတစ်ဆင့်ပြောင်းလဲရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။
အကယ်၍ မင်းက Facer Watch Faces သည် operating system နှင့်အတူစမတ်နာရီအားလုံးနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည် Android Wear 2.0, နှင့် Samsung Gear S3 နှင့် Gear S2 နာရီများပင် Tizen platform ပေါ်တွင်အခြေခံသည်။
Facer Watch မျက်နှာများကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ
ရေးသားသူ: Little က Labs က, Inc
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » စမတ်နာရီ » သင်၏စမတ်နာရီအတွက်နာရီအသစ်များလိုအပ်ပါသလား။ - Facer Daily Mix သည်သင့်ကိုကူညီနိုင်သည်
Xiaomi Mi6ကိုစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းအရောင်းအ ၀ ယ်တွင်စတင်ရောင်းချခဲ့သည်